China Marine Pneumatic Rubber Fender Yokohama Type Inoyerera Dock Bumpers fekitori uye vanotengesa | Haohang
Marine Pneumatic Rubber Fender Yokohama Rudzi Rwuri Kuyangarara Dock Bumpers
1. Kukwidziridzwa kwesimba kwakanyanya 2. Super yakaderera reaction simba 3. Iyo inoteedzana nekubatana yakanaka panguva yekushanda 4. Irabha pneumatic fender ichave ichiyangarara pamusoro pemvura, kunyangwe iyo ngarava inofamba, inogona kuiswa.
Zita Rekushandisa Haohang
Chigadzirwa Chigadzirwa Pneumatic Rubber Fender
Kushanda Marine Outfitting
Rinoshanda Ipa Max Kudzivirirwa
Chitupa CE BV ISO
Kupa Mazano 1000 Piece / Zvidimbu paZuva
Kavha Dhata Seaworthy kurongedza mudziyo
Huwandu (Zvidimbu 1 - 1 2 - 10 11 - 100 > 100
Est. Nguva (mazuva) 3 5 60 Kutaurirana
Kambani Kuraira Kupfupi:
Qingdao Haohang Fender Airbag Co., Ltd.iri iri pa 1760 # Yanqing Rd, Jimo Dunhu, Qingdao, Shandong Province.
Isu takasarudzika muShip Kutanga Laibha Mbavha, Marine Rubber Fenders,
Pneumatic Inoyerera Fenders, Boat Fender, Gasi Airbag, Mapaipi Airbag Etc.
Zvese zvigadzirwa zvedu zvakabvumidzwa neCCS, BV, ABS, SGS Nezvimwewo.
Isu tine yedu fekitori yekugadzirisa iyo Yemhando Rubber nemuchina wePurasitiki,
Kusanganisa uye Kuwedzera
Inonamatira kune yakasarudzika-inotarisisa sarudzo, iyo kambani inopa vatengi vane zvigadzirwa zvakagadzirwa,
izvo aivigirwa kuna Europe, North America uye Asia, pamwe akapfuma kugadzirwa Experience,
mhando yepamusoro yezvinodiwa, kusangana nezvinodiwa nevatengi, inokasira uye nekukurumidza mushure mekutengesa-kuchengetedza,
kugamuchira iwe kushanyira fekitari, kurukura pamwe!
Kutenda chako chiziviso!
Rudzi rwemhando iyi yevafenders:
Iri isimba rakakwira, uye yakakwirira anti-ngura fender system. Irabha fender ine cheni mambure mhando, tambo mambure mhando uye yerabha mat mhando.
Pneumatic fender-mambure mhando:
Iyo fender muviri unogadzirwa neketani mambure kana tambo mambure etc. Matare emaketani anokwanisa kumira kurora kwenguva refu uye anowanzo kuvakwa nematairi akashandiswa uye maoko erabha kuti apezve dziviriro. Fiber mambure anoshandisa chete maoko erabha. Waya mambure akareruka uye ari nyore kugadzirisa.
Iyo inonyanya kuratidza hunhu hwepneumatic rubber fender ndeiyi:
Iyo fender yakafukidzwa neteneti cheni mambure, uye izvi zvinowedzera nguva yekushandisa yeiyi inflatable fender.
Isu tinoshandisa rakashandiswa tai kune mambure evativhara, rese vhiri richaitwa nyowani kurapwa, iyo nzvimbo yakanaka.
Ketani yedu ane hunhu Anti-UV uye Anti-gungwa ngura. Yese ngetani izingi kwakakurudzira kurapwa. Tine zvakare PP yakakomberedzwa tambo kutsiva Chain, tambo iyi zvakare anti-uv, anti-gungwa mvura, anti-abrasion uye anti corrosion.
Iyo dhayamita kubva 0.2m kusvika 5m, uye kureba kuri kubva pa0.5m kusvika 12m.
Iyo pneumatic fenders inonziwo inflatable fenders, ine inotevera hunhu:
1. Kubata simba kwakanyanya
Iko kunwiwa kwesimba ndiyo hombe data yeiyo pneumatic rubber fender. Sezvo huni hwechikepe hunowedzera, simba rekukanganisa kwechikepe chinosangana nemahombekombe kana zvimwe ngarava zvinowedzera zvakanyanya panguva yekushanda kweberthing. Iyo yakakura simba yesimba inofanirwa kuiswa neiyo yakazara deformation yeiyo fender uye yakakwana nzvimbo yekubatana. Yedu pneumatic fender kudzvinyirira deformation inogona kuve inopfuura 60%, uye iyo yepasirese nzvimbo nzvimbo iri kuwedzera nekumanikidza deformation iri kuwedzera. Iyi fenders 'simba rekutora kugona kwakawanda kupfuura mamwe marudzi fenders.
2. Super yakaderera reaction simba
Isu tinozadza yakaderera mweya yekumanikidza mukati meye inflatable fenders, saka iko kwemukati kumanikidza kunowedzerwa kushomeka panguva yekumanikidza def
Nekuda kwenzvimbo hombe yekubata, saka kumanikidza kunzvimbo yechikepe nzvimbo yakaderera. Kuenzaniswa nedzimwe ngarava dzinodzivirira, izvi hazvisi
3. Iyo yekudyidzana inofarira yakanaka panguva yekuvhiya
Kune ngarava, panofanirwa kuve neimwe kona yekuwana kumahombekombe uye mukana wekubatanidza ngarava. Yedu inflatable pneumatic fenders anonyanya kuchinjika kune vanofarira kutaurirana kupfuura vamwe vafenders.
4. Irabha pneumatic fender ichave ichiyangarara pamusoro pemvura, kunyangwe ngarava inofamba, inogona kuiswa.
Yutung inflatable fenders inoyerera pamusoro pemvura (inopfuura 50% yenzvimbo yemuviri). Uye nekutenderera, iyo fender chinzvimbo haizo shanduke zvine chekuita nechikepe chinzvimbo. Kunyanya, apo ngarava painofamba nemasaisai, iyo inokwenenzvera inokwenenzverwa fenders inotenderera nekukwesana kudiki. Naizvozvo, hazvizokanganise kupfeka kwekutakura, uye zvakare inogona kurerutsa kuzungunuka uye kudedera kwechikepe.
Iyi irabha inflatable fenders yakashandiswa zvakanyanya mumatangi emafuta, ngarava dzemidziyo, yachts, mafuratifomu ekumahombekombe, madoko makuru, chiteshi chemauto
Inofananidzwa neyechinyakare elastic rubber fender, yedu inflatable yerabha fender ine zvinotevera zvinotevera.
1. Simba rekutora rakakura, uye simba rekuita pachikepe ishoma.
2. Nyore yekumisikidza
3. Kusimba kwakanaka, hakuzokanganise pasi pekumanikidza
4. Chiedza uye hupfumi
Marine pneumatic fender performace bvunzo:
Attn.Pls Isu tiri vatengesi veRaw Rubber Mat yekugadzira maAirbags. :
Fenders pneumatic kunyorera:
1.Chii chitupa chaunogona kupa kune yerabha inflatable fenders?
Mhinduro: ISO CCS, BV, SGS etc.chitupa chiripo.
2. Ndeipi nguva yewarandi yako inflatable fenders?
Mhinduro: Yedu garandi nguva ndeye 24months
isu tichava nebasa rekugadzirisa kana kutsiva iyo nyowani yerabha inflatable fenders yako kana zvaratidza kuti iri dambudziko redu remhando yepamusoro.
3. Ndeipi hupenyu hweyako irabha inflatable fenders?
Mhinduro: Yakagadzirirwa hupenyu hwearabha inflatable fenders ndeye makore matanhatu kusvika gumi
4.What chii MOQ yako yerabha inflatable fenders?
Mhinduro: MOQ yedu ndeye 1PC
5.I ndinoda kuedza yako inflatable fenders, asi ini handimboishandise uye handizive mashandisiro, unogona kundibatsira?
Mhinduro: Usanetseka. Isu tinotumira kuraira bhuku pamwe chete nerabha inflatable fenders
6.Ndine ngarava asi ndisingazive kusarudza saizi yerabha inflatable fenders, unogona kundibatsira?
Mhinduro: Usanetseka. Pls ndiudze ruzivo rwechikepe chako, tinogona kukurudzira akakodzera rabha inflatable fenders saizi uye huwandu hwako
7.Are iwe fekitori kana kutengesa kambani?
Mhinduro: Tiri kugadzira fekitori, iri muQingdao
Pashure: Monopile Inoyerera Polyurethane EVA Donut Fender
Zvadaro: Yakasarudzika Zvigadzirwa Pneumatic Bumper - Yakakwira Kutakura Kukwanisa Kuendesa Airbag Yekusimudza Uye Kumhara - Haohang
Rubha D Fender
Rubber Vanyoreri Vezvikepe
Mhepo dzeMahombekombe, Ship Mhepo Bhegi, China Rubber Fender, Wakaumbwa Block, Rubber Fender, Tec Zvikepe,